असामान्य योनिस्रावको उपचार « Sadhana
असामान्य योनिस्रावको उपचार
कि शोरी, युवती वा महिलाहरुको योनिमार्ग स्वस्थ, चिप्लो र मुलायम हुनुका साथै पाठेघरको मुख एवं योनिमार्गबाट योनिस्राव निर्माण भई निरन्तर बहाव हुनु जरुरी छ । तर यही लाभकारक योनिस्राव पनि कसैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ । स्त्रीरोग बहिरङ्ग विभागमा आउने नियमित सेवाग्राहीको ठूलो संख्या अधिक वा असामान्य योनिस्रावको गुनासो लिएर आउनेहरुको हुन्छ ।
बोलिचालीमा सेतो पानी भनिने सामान्य खालको योनिस्राव (योनिरस) मासिक चक्रअनुसार फरक–फरक हुन्छ । पीप एवं गन्धरहित, नचिलाउने खालको तथा निरन्तररुपमा योनिद्वार रसिने गरी, भित्री कपडा भिज्ने गरी वा प्याड नै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी हुने योनिस्रावको बहावलाई असामान्य एवं अधिक योनिस्राव मान्नुपर्दछ । त्यसै गरी सामान्य प्रकारको योनिस्रावको अधिक बहाव पनि व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । तर कति मात्रालाई अधिक मान्ने भन्नेचाहिँ कुनै स्पष्ट परिभाषा छैन । योनिस्राव सामान्य खालको हो वा संक्रमित खालको, छुट्याउन भने यौनाङ्गको आन्तरिक जाँचपड्तालका साथै ल्याब परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पाठेघरको मुखमा रहेको कुनै समस्याले योनिस्राव बढेको हो भने सामान्य खालको शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ ।
किन बढ्छ योनिस्राव ?
स्त्री–शरीरमा रहेको इस्ट्रोजेन हर्मोनको प्रभावले योनिस्रावको उत्पादन हुन्छ । कुनै कारणवश इस्ट्रोजेन हर्मोनको उत्पादन बढ्न गएमा यसले योनिद्वारको बाह्य सतह र पाठेघरको मुखको ग्रन्थिमा असर गरी योनिस्रावको बहाव बढाउँछ । कतिपय अवस्थामा योनिस्रावको अधिक उत्पादन शरीरको स्वाभाविक उत्पादन नै हो । जस्तै– यौवनावस्थामा, महिनावारीको मध्यभागतिर (डिम्ब निस्किने बेला), महिनावारी हुनु ठीक अगाडि स्त्री जननेन्द्रियमा रगतको बहाव बढ्नाले सेतो पानी बढी बग्छ ।
यौनसम्बन्धी सोच्दा, यौनबारेका पत्रपत्रिका पढ्दा, यौनजन्य फिल्म हेर्दा यौन उत्तेजना बढ्छ । यौन उत्तेजनाको बेला योनिद्वारको दुवैतिरको बार्थोलिन ग्रन्थिबाट अधिक मात्रामा ग्रन्थिरस उत्पादन भई तथा गर्भवती अवस्थामा इस्ट्रोजेन हर्मोनको अधिक उत्पादनले रगतको बहाव बढ्न गई अधिक योनिस्राव हुन्छ ।
पाठेघरको मुखको बाह्य सतह ताछिएर, पाठेघरको मुख जीर्ण तवरले सुन्निएर वा त्यसमा सानो मासु पलाएर पनि योनिस्राव हुन्छ । पाठेघर झर्ने (आङ खस्ने) समस्या भएका, पाठेघर पछाडि फर्किएका, पाठेघरको मुखमा जीर्ण प्रकारको सुजन भएका, पिल्स चक्कीको सेवन गरेका महिलाको यौनाङ्गमा रगत बहाव बढ्नाले तथा लामो समयसम्म बिरामी हुँदा योनिद्वारको बाह्य तह अत्यधिक झर्नाले पनि बढ्ता मात्रामा योनिस्राव भएको आभास हुन्छ ।
किशोरी, युवती अनि महिलामा हुन सक्ने सेतो पानी बग्ने समस्यालाई सामान्य वा असामान्यमा गरी वर्गीकरण गरी सोही अनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः यौनाङ्गको आन्तरिक परीक्षणको बेला सामान्य खालको अधिक योनिस्राव सेतो वा क्रिम रङ्गको हुन्छ । प्रताडित महिलाले यौनाङ्गवरिपरि कन्याइराखेको कुनै लक्षण चिह्न हुँदैन । पाठेघरको जाँच पनि सामान्य नै हुन्छ ।
सामान्य योनिस्रावको उपचार
सामान्य खालको अधिक योनिस्रावको उपचारका लागि पोषिलो खानेकुरा खानुपर्दछ । विशेष गरी गर्भावस्थाको बेला, पिल्स चक्कीको सेवन ताका, महिनावारीको मध्यताकाको अधिक योनिरस बहावलाई सामान्य नै मानी चिन्ता गर्नुहुँदैन । पाठेघरको मुखमा रहेको कुनै समस्याले योनिस्राव बढेको हो भने सामान्य खालको शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ । पिल्स चक्कीको सेवनले भिँmजो लाग्ने गरी योनिस्राव बढेको छ भने केही समयको लागि पिल्स खान बन्द गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यचाहिँ नियमित तवरले यौनाङ्गको उचित सरसफाइ नै हो ।
असामान्य प्रकारको योनिस्राव
यौनाङ्गमा कुनै प्रकारको संक्रमण हुँदा वा यौनरोग लाग्दा भने रङ्ग फेरिई योनिस्रावको बहाव बढ्ने, नराम्रो गन्ध आउने, तल्लो पेट दुख्ने, योनिद्वार चिलाउने, पिसाब पोल्नेजस्ता लक्षण–चिह्न देखा पर्दछन् । विनासंक्रमण पनि स्वाभाविक उत्पादन भई योनिस्राव असामान्य हुन सक्छ भने पाठेघरको मुख वा योनिद्वारको संक्रमण, पाठेघरको मुखको वा योनिद्वारको भित्ताको ट्युमर (क्यान्सर), योनिद्वारमा कुनै प्रकारको बाह्य वस्तु अड्केमा असामान्य प्रकारको योनिस्राव हुन्छ । यसका साथै कडा खालको एन्टिबायोटिक औषधिको सेवन, चिनीको रोग (मधुमेह), एड्स भएका बेला, मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको अवस्थामा पनि योनिस्राव असामान्य हुन्छ ।
क्यान्डिडा वा मोनिलियासिस (फङ्गाइ) को संक्रमणमा दहीजस्तै सेतो छोक्रा–छोक्रा भएको योनिस्राव हुन्छ । ब्याक्टेरियल भजाइनोसिसमा खैरो खालको कुहिएको मासुजस्तै गन्हाउने तर नचिलाउने योनिस्राव हुन्छ । यस्तै ट्राइकोमोनास नामक परजीवीको संक्रमणमा हरियो वा पहेँलो खालको योनिस्राव, पाठेघरको मुखको सुजनमा पानीजस्तो सङ्लो योनिस्राव, योनिद्वारमा कुनै प्रकारको बाह्य वस्तु अड्किँदा गन्हाउने खालको पीपजस्तो रगत मिसिएको योनिस्राव हुन्छ । त्यसै गरी पाठेघरको मुखको वा योनिद्वारको भित्ताको ट्युमर (क्यान्सर) मा प्रायः रगत मिसिएको गन्हाउने खालको योनिस्राव हुन्छ ।
यसको अलावा धातुरोग, क्लामाइडिया लाग्दा गम्भीर खालको निःसन्तानको समस्या निम्तिन सक्छ । महिलामा धातुमेह रोग लाग्दा योनिद्वारबाट पहेँलो वा हरियो खालको योनिस्राव बग्ने, पिसाब पोल्ने, हल्का ज्वरो आउने, तल्लो पेट दुख्ने, यौनक्रियाका बेला पीडा हुने, रगत बग्ने हुन्छ ।
क्यान्डिडा, धातुमेह, क्लामाइडिया, ट्राइकोमोनासको संक्रमण हुँदा दुवै यौन पार्टनरलाई एकैपटक उपचार गर्नुपर्दछ । कारक तत्वअनुसार औषधोपचार गर्नुपर्दछ । विभिन्न खाले एन्टिमाइक्रोबियल, प्रतिजैविक औषधिको प्रयोगका साथै यौनाङ्ग नियमित सफा राख्नुपर्दछ । धातुमेह, क्लामाइडिया, ट्राइकोमोनासको संक्रमणमा बहुऔषधि चाहिन सक्छ । सुती कपडाले बनेका भित्री वस्त्र (अन्डरवेयर) नियमितरुपमा फेर्ने गर्नुपर्दछ । योनिस्राव अधिक भएमा स्यानिटरी प्याड वा इस्त्री (आइरन) लगाएको कटनको टालो प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ ।
बढ्दो शहरीकरण अनि आधुनिक परिवेशका कारण कतिपय अवस्थामा यो समस्यालाई नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा यदि कुनै बालिका, किशोरी वा युवतीमा असामान्य प्रकारको योनिस्राव बहावको समस्या पटक–पटक हुन्छ भने कतै स्कुल वा घरमा आफन्त वा शिक्षकबाट यौन दुव्यर्वहार त भइरहेको छैन वा उनले यौन खेलौना प्रयोग गरिरहेकी त छैनन्, कतै उनी
महिला समलिङ्गी नै भए पनि असुरक्षित यौनकार्य त गरिरहेकी छैनन् ? भनेर आशंका गर्नुपर्दछ । सोही मुताबिक मानसिक परामर्श (साइकोथेरापी) लगायतको आवश्यक उपचार गर्नुपर्दछ ।